क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयको आकस्मिक सेवा संचालनमा - Subhay Postक्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयको आकस्मिक सेवा संचालनमा - Subhay Post
सुभाय् संवाददाताMarch 31, 2020 मा प्रकाशित (२ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ० मिनेट
करिव पुरा विश्व नै कोरोना भाइरस कोभिड १९ को चपेटामा परेको बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । वर्तमान परिवेशमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै सावधानी अपनाउँदै संक्रमणबाट बच्नको लागि अस्पताललाई पनि नियमित सेवा सुचारु गर्न समस्या भइरहेको अवस्था छ ।
अन्य समयमा जस्तै नियमित स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने विरामीलाई पनि संक्रमणबाट बचाइराख्न विगतमा जस्तै अस्पताल आउन दिन सकेको छैन ।
यस्तै परिवेशमा काठमाडौंको भित्री बस्तीमा क्षेत्रपाटीस्थित क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयले पनि हाल इमरजेन्सी सेवा मात्र संचालन गरिरहेको छ ।
इमरजेन्सीमा आउने बिरामीलाई सिधै कक्षमा नलिइ अस्पताल बाहिरै हात धुने व्यवस्था गरिएको छ भने गेटमै स्यानिटाइजर दिइन्छ । त्यसपछि थर्मोगनले ज्वरो नापेर ज्वरो नभएका विरामीलाई मात्र इमरजेन्सी कक्षमा प्रवेश गर्न दिइएको छ ।
अनिवार्य मास्क लगाएर आउनको लागि गेटैमा सूचना टाँस गरिएको छ भने मास्क नभएकाको लागि अस्पतालले नै गेटमा निःशुक्ल मास्क उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
ज्वरो देखिएका विरामीलाई अलग्गै टेन्टमा चेकजाँच गर्ने गरिएको छ भने आवश्यकताको आधारमा रिफर गर्ने गरिएको छ ।
कुनै पनि प्रकारको रोग वा संक्रमण अन्य विरामीमा नसरोस् भन्ने तर्फ आफुहरु निकै सतर्क रहेको अस्पताल संचालक समितिका अध्यक्ष डा. मनोजमान श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
ज्वरोका बिरामी त्यहाँबाट गएको आधा घण्टाभित्रमा टेन्टमा स्प्रे गरेर डिसइनफेक्ट गर्ने गरिएको अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
साथै, अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षामा पनि आफुहरु निकै सतर्क रहेको डा. श्रेष्ठको भनाई छ ।
अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय पिपिइ उपलब्ध गराइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
डा. श्रेष्ठको भनाई अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई घरमा लिन जाने र पुर्याउन जाने व्यवस्था गरिएको छ भने बाहिर पुगेर अस्पताल आएको गाडी तुरन्तै पखाली डिसइनफेक्ट गर्ने गरिएको छ ।
साथमा विरामी ल्याउने एम्बुलेन्सलाई पनि हरेक पटक पखालेर डिसइनफेक्ट गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।
यसको साथै ड्यूटि अफ भएर घर फर्किने स्वास्थयकर्मीलाई अस्पतालमै नुहाउन दिएर मात्रै पठाउने गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
यसै बीच काठमाडौंमा कसैलाई केही स्वास्थ्य समस्या भएमा आफुलाई निर्धक्क फोन गर्नलाई डा.श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो । साथै, अन्य स्वास्थ्य समस्याको लागि पनि फोनबाटै आवश्यक सल्लाह सुझावसहित सेवा दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै सम्वन्धित चिकित्सकको फोन नम्बरहरु पनि डा.श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष डा. मनोजमान श्रेष्ठ ९८५१२७६८८८
नाक, कान, घाँटी ९८५१०१७५३७, ९८४१४८२४६९
आँखा ९८४१२२६६४४, ९८५१०४३१८४
बालरोग ९८४१२०३४४५, ९८४१३९९३९०
हाडजोर्नी तथा नशा ९८४३०२८२३७, ९८४१२५४७०९
स्त्री रोग ९८४१२२१४७६, ९८०८०९४७८०
मधुमेह तथा थाइराईड ९८१८४१४११०